Markii ugu dambeeysey ee ay farriin soo diraan kuwa afduubtay Xafsa & gabar kale oo la maqan | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Markii ugu dambeeysey ee ay farriin soo diraan kuwa afduubtay Xafsa &...
Markii ugu dambeeysey ee ay farriin soo diraan kuwa afduubtay Xafsa & gabar kale oo la maqan
(Nairobi) 18 Juun 2021 – Gabar 23-jir ah oo deggan xaafadda California Estate ee Nairobi ayaa la qafaashay iyadoo dadkeeda laga dalbanayo Sh5 milyan oo shilin.
“Dadka qafaashay markii ugu dambaysey ee ay farriin soo diraan waxay ahayd Arbacadii Juun 16, abbaarihii 11:30pm iyagoo madax furasho dalbanaya,” ayuu yiri dumaashiga Xafsa, Cumar Ibraahim oo la hadlay The Standard.
Kaamarooyinka amaanka ee dukaankeeda ayaa muujinaya iyada oo dukaanka sii geleysa Talaadadii 4:44pm waxaana wehlinaysey haweenay lagu sheegay Xafsa Cabdulwahaab. Waxaa labadoodu ay markiiba sababo aan la sharrixin u aadeen Kayole.
Gabadha kale oo iyaduna qaraha Kayole kaga ganacsata, ayaa iyaduna maqan oo la la’yahay.
Arbacadii 4pm, afduubtayaashu waxay soo bandhigeen muuqaal soconaya 35-ilbiriqsi oo muujinaya Xafsa oo indha ka duuban, lugaha iyo gacmahana ka xiran, ayna muuqato in si xun loo jirdiley.
Waxay af Sawaaxili ku leedahay: “Nimeshikwa na wanataka pesa, tafadhali mtume pesa (Waa la i afduubtay waxayna dalbanayaan madax furasho. Fadlan soo dira).”
Qoyskeeda iyo dadwaynaha walaacsan ee Islii ayaa Booliiska Kenya ka codsaday inay arrintan gacan bir ah ku qabtaan dadka afduubyadan ka dambeeya. Weli wax wacaal ah oo geeri iyo nolol ah se lama hayo.
Previous articleTOOS u daawo: Netherlands vs Austria – LIVE (Shaxda Sugan)
Next articleCovid-19 ”nooca Hindiya” oo todobaad gudihii UK ku faafay 78% (Dhallinyarada oo uu ku dhacayo & talo la jeediyey)